Uyenza njani imiyalezo yakho ibonakale kwiTelegram | I-Androidsis
Umnxeba uye waba yenye yezona zicelo zemiyalezo zaziwayo kwihlabathi liphela. Esinye sezizathu zokuba kutheni le nto yenzekile kukuba sisicelo esisinika iindlela ezininzi zokwenza ngokwezifiso. Yinto leyo yoyisile abasebenzisi abaninzi, ukongeza kuyo uhlaziyo rhoqo. Kwaye namhlanje sikubonisa indlela yokufumana okuninzi kolu hlengahlengiso ngomsebenzi.
Kuba iTelegram iyasivumela ukuba sihlele imiba emininzi yomdibaniso wayo, ukuze siyilungelelanise nothando lwethu. Singakwazi nokuhlela imiyalezo esiyithumela kwi-app, ukuze ibonakale. Hayi imiyalezo ngokwabo, kodwa amagwebu omyalezo angenziwa ekuhleni. Ngaba uyafuna ukwazi ukuba kanjani? Sikuxelela yonke into engezantsi.
Kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo sikubonise indlela yokwenza ungahlela izihloko kwiTelegram, into esikuxelela yona kwesi sifundo. Kule meko, amanyathelo ekufuneka elandelwe ayafana, ngenxa yoko awuzukubanzima ukuba sele ulungiselele isihloko kwisixhobo sokuthumela imiyalezo.
Ngaphambi kokuqala, Kubalulekile ukuba silumke xa sihlela la maqamza omyalezo. Kuba siguqula ukungafihlisi kwabo, kunokwenzeka ukuba siye ngaphezulu kwaye sibenze babonakale. Ke ngoko, kufuneka siliguqule ngononophelo eli candelo. Kufuneka ihlengahlengiswe kakuhle kwisicelo, ukufumana isiphumo esifunekayo.
Imiyalezo engafihliyo kwiTelegram
Okokuqala kufuneka siye kuseto lweTelegram. Ukwenza oku, sicofa kwimigca emithathu ethe tye kwinxalenye ephezulu yasekhohlo kwesikrini kwaye imenyu yesicelo iyavula. Ukusuka kukhetho oluvela kwiscreen, kuya kufuneka sikhethe useto, olusekupheleni.
Ngaphakathi kuseto kufuneka siye kwicandelo lomxholo, ukuze sikwazi ukuvula umxholo womhleli wesicelo. Ngoko ke kufuneka Cofa kumxholo esiwusebenzisayo ngalo mzuzu, esiya kubona ukuba siphawulwe ngophawu. Emva koko sicofa amanqaku amathathu avela ecaleni kwesihloko esichaziweyo kunye nokukhetha okubonisiweyo kwiscreen, sikunika ukuba sihlele.
Okulandelayo, siya kubona ukuba a ipeyinti / umbala wemibala yepeyinti Phezulu kwesikrini. Emva koko ucofe kuyo, ukuze umhleli womxholo weTelegram uvule. Ngale ndlela, sinokuqala inkqubo ngoku.
Isikrini esibonakala ngoku sibonisa uluhlu kunye nayo yonke imiyalelo ekhoyo kwi-app, ukuze sihlele onke amalungu e-Telegram interface. Nangona kule meko sinomdla wokulungisa yonke into, kodwa sifuna ukubanakho ukuguqula kuphela umyalezo we-bubble. Imiyalelo esinomdla kuyo kule meko yile: chat_inBubble kwaye ncokola_outBubble. Ke sibajonga kolu luhlu.
Ngokuqinisekileyo aziveli kuluhlu, yiyo loo nto, Kuya kufuneka sincokole kwi-app. Kwaye kuluhlu lwemiyalelo esiya kuyifumana esiyifunayo. I-chat_outBubble command inoxanduva lokuhlela amaqamza emiyalezo esiyithumela kwiTelegram. Ngelixa elinye, umnxeba chat_inBubble yemiyalezo esiyifumanayo. Sinethuba lokuhlela zombini, ukutshintsha umbala kunye nokubonakala.
Xa siyifumene kuluhlu, cofa kwenye kwaye sizakufumana isangqa esinemibala, njengaleyo sasinayo kwi hlela isifundo semixholo. Singahlela inani lokugqibela eliphumayo, lelona liphetheyo ukubonisa ukungafihli okanye ukusebenzisa ibha esecaleni, nokuba yeyiphi na ekulungeleyo. Ke, silungelelanisa ukungafihli kwaye siyakubona kwincoko kwiTelegram. Nje ukuba inqanaba elifunwayo lifikelelwe, kufuneka silinike nje ukugcina. Yiyo loo nto, sele siyenzile imilayezo icace gca.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » Uyihlela njani imiyalezo kwiTelegram ukuyenza ibonakale
Ungakukhubaza njani ukungcangcazela kwekhibhodi kwi-Android